कोरोना कहरमा ८५ गर्भवतीको मृत्यु – Kite Sansar
गर्भावस्थाको जटिलता र रक्तस्राव नै मुख्य कारण हुन्’, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्या पौडेलले भनिन्, ‘त्यसबाहेक संक्रमणको कारणले पनि ज्यान गुमाउँछन्। अन्य शारीरिक समस्या वा दुर्घटनाका कारण पनि ज्यान गुमाएको पाइएको छ।’
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन्। लकडाउन एवं निषेधाज्ञाका कारण गर्भ जाँच गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ। ‘सर्वसुलभ यातायात र समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न सके धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो’, डा. पौडेलले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलाबेलामा तालिम दिइरहनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।’